भक्तपुर घटना : सुतेकै ठाउँमा आमा-छोराको ह``त्या`पछि आ``त्म`ह`त्या ! - MassiveKhabar
भक्तपुर घटना : सुतेकै ठाउँमा आमा-छोराको ह“त्या`पछि आ“त्म`ह`त्या !
२७ भदौ, काठमाडौं । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–६, कुन्डोलमा तीन जनाको श`व भेटिएको प्रकरणमा श्रीमती र छोराको हत्यापछि ३६ वर्षीय सुदिप अधिकारीले आ`त्म`ह`त्या` गरेको हुनसक्ने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई जनाको सुतेकै अवस्थामा धारिलो हतियार प्रयोग गरी ह`त्या` गरेर सुदिपले वि`ष` सेवन गरी आ`त्म`ह`त्या` गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको हो ।
शुक्रबार साँझ सवा ५ बजे अधिकारीका भाइ सुनीलले प्रहरीलाई खबर गरेपछि भक्तपुर प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली अपराधस्थलमा पुगेको थियो । त्यसक्रममा सुदिपसहित उनकी श्रीमती ३४ वर्षीया सम्झना र १५ वर्षीय छोरा सुशान्तको श`व भेटिएको थियो ।
प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका फरेन्सिक विज्ञसहितको टोलीलाई पनि छानविनका लागि अपराधस्थलमा बोलाएको थियो । त्यसक्रममा सम्झना र सुशान्तको मृ`त्यु केही दिन पहिले नै भएको पाइएको छ ।
‘पहिलो तलामा सुशान्त र दोस्रोमा सम्झनाको श`व भेटिएको थियो, भित्तामा समेत रगतको छिर्का देखिएको थियो’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘फरेन्सिक विज्ञसहितको टोलीबाट जाँचबुझ गर्दा दुवै जनाको टाउकोमा गहिरो चोट देखिएको थियो ।’
स्रोतका अनुसार घरमा रहेको दाउ जस्तो धारिलो हतियार प्रयोग गरेर आमा–छोराको ह`त्या` भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार दुवै जनाको श`व सडिसकेको अवस्थामा भेटिएको थियो । त्यसैले कम्तिमा दुई दिनअघि आमा–छोराको ह“त्या भएको हुनसक्ने देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, यसबारे यकिन विवरण पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्र प्राप्त हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार अन्तिम तलामा ढोका छेउ मृ`त अवस्थामा भेटिएका सुदिपको शरीरमा भने कुनै बाहिरी चोटपटक छैन । उनले वान्ता गरेको संकेत देखिन्छ भने श`व पनि जस्ताको तस्तै रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार भान्सामा भात, तरकारी लगायत केही खानेकुरा पनि छन्, जसमा विषको जस्तो गन्ध आएको छ ।
प्रहरीले परीक्षणका लागि खानेकुरालाई पनि प्रयोगशालामा पठाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीका अनुसार भ¥याङमा कुकुर पनि मृत भेटिएको छ । कुकुरको पनि विषकै कारण मृ“त्यु भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार एक वर्ष पहिले सुदिपले औषधि पसलमा काम गर्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय जागिर नखाएको भन्दै उनी र श्रीमतीबीच झगडा हुने गरेको आफन्तहरुले बताएका छन् । छोरासँग पनि उनको झगडा पर्ने गरेको छिमेकीहरुले बयान दिएका छन् ।